Imisebenzi yeemovie | Ndisuka mac
Ifilimu kaSteve Jobs etyunjelwe amabhaso ama-3 e-BAFTA
Ekuqaleni kukaDisemba sikwazise ukuba ifilimu yokugqibela ebalisa ngobomi bukaSteve Jobs, obedlala indawo kaMichael Fassbender nosele eseSpain, Utyunjwe kwiiGlobe zeGolide ezine. Kucacile ukuba nangona uluntu lungaxhasi ifilimu, abagxeki bayayamkela ifilimu malunga neMisebenzi, phantsi kweskripthi sika-Aaron Soorkin. Kwiintsuku ezimbalwa, asazi ukuba ekugqibeleni iphumelele nayiphi na iGlobal Globes eyayityunjelwe umboniso bhanyabhanya.
Ngeli xesha, imovie efanayo usandula ukufumana amagama abatsha abathathu, ngeli xesha kwi-BAFTA yase-Bhritane, ii-oscars zebhanyabhanya yaseBritane. Amagama atyunjiweyo ahambelana nomdlalo bhanyabhanya obalaseleyo, owona mlingisi uxhasayo kunye nomdlali ophambili.
Ngokusekwe kwi-biography esemthethweni egunyazisiweyo kaWalter Isaacson, lo mbhalo walungiswa ngu-Aaron Soorkin. Ukutyunjwa komdlali weqonga oncomekayo uya kuKate Winslet kwindima kaJoanna Hoffman, kubudlelwane noluntu kwinkampani. Ukutyunjwa komdlali obalaseleyo ibuyela umva kuMichael Fassbender, otyunjelwe iGolden Globes kudidi olunye, oluya kulwa noEddie Redmayne, uLeonardo Dicaprio, uBryan Cranston kunye noMat Damon, bonke bonyulwe kudidi olunye.
UDanny Boyle ugxile ekuhambiseni ifilimu kwiminyhadala eyahlukeneyo ukuze andise umdla wefilimu kwakhona, kuba njengoko sonke sisazi, inyuse nje ngaphezulu kwe-10 yezigidi zeedola Ukusukela ukuqala kwayo e-United States, xa ibinexabiso lemveliso yezigidi ezingama-60.
UMichael Fassbender kutshanje ufumene ibhaso lePalm Springs Film Festival. Amabhaso e-BAFTA aya kuziswa ngoFebruwari 14 kwaye ndivela eMac siza kukwazisa nge / amabhaso afunyanwa kwifilimu yamva nje ngobomi bukaSteve Jobs.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ifilimu kaSteve Jobs etyunjelwe amabhaso ama-3 e-BAFTA
I-Loop yaseMilanese kwi-Space Grey ye-Apple Watch isondele
I-Apple yokwandisa iziko ledatha iReno